Ungalungisa imoto yakho yesikebhe bese ubuyela emanzini ngaphandle kokuchitha imali eningi kumthengisi wasolwandle oyithengisayo. | Ukulungiswa Kwezimoto Zesikebhe Esingaphandle
Ungalungisa imoto yakho yesikebhe bese ubuyela emanzini ngaphandle kokuchitha imali eningi kumthengisi wasolwandle oyithengisayo.
Inhloso enkulu yaleli sayithi ukwaba okuhlangenwe nakho kwami ​​nokunikeza izeluleko namaqhinga asebenzayo amahhala wokulungisa izinjini ezithile zesikebhe zakudala ze-Evinrude noJohnson ukuze uzizwe ukhululekile ukwenza okufanayo. Futhi, nginikeza umlando ongemuva kuyinye yalezi zimoto ukuze uzazise kangcono. Uma unenye yama-motors esikebhe angaphandle engikhuluma ngawo kulawa ma- "Tune-Up Projects," futhi ufuna ukwenza u-Evinrude noma uJohnson motor motor wesikebhe sakho esidala ukuze sihambe kahle, nansi indawo yakho. Ngenkathi leli sayithi lingena esikhundleni sencwadi yezinsizakalo, amakhasi achaza lawa maphrojekthi wokulungisa aqukethe imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo kanye nezithombe ezihamba ngaphezu kwalokho ongakuthola kwincwajana ejwayelekile yesevisi. Njengoba isikhathi siqhubeka, ngithemba ukwengeza "ama-Tune-Up Projects" amaningi ohlwini olungezansi. Impendulo enhle iyaziswa njalo, kepha nami ngingakuthatha ukugxekwa.
Izinto zishintshe kakhulu kule minyaka eyi-100 + edlule kepha ezinye izinto zihlala zinjalo. Uthando lwezikebhe, amanzi, ngaphandle, nephunga nomsindo umuntu ayohlala ezihlanganisa nenjini yesikebhe esingaphandle. Yizinto zonke eziletha imicabango emnandi ezingqondweni zethu futhi ezihambisana nezikhathi ezimnandi. Abantu abaningi bathembele kuma-Evinrude motors ukuthi abalethe ekhaya ngokuphepha, ukubalekela iziphepho, ukuhlinzeka amandla lapho futhi lapho edingeka khona kokubili emsebenzini obucayi kanye nezwe lonke lokuzijabulisa. Ngakho konke okufezile, siyabonga u-Ole Evenrude. Kwangathi ungaphumula ngokuthula futhi ukhunjulwe njalo.
Siyabonga u-Ole Evinrude nomqondo wakhe, eminyakeni engu-100 + edlule yokulenga imoto ephathekayo ngemuva kwebhokisi lomgwaqo, nokuletha inkathi entsha yokuthuthwa kwamanzi.
Ngiyacela CHOFOZA LAPHA ukuqhubeka isingeniso kombhali.